I-synthesis synthesis kunye nekhontrakthi yeR & D Apicmo cdmo Abakhiqizi
Iinkonzo zethu > I-synthesis kunye ne-R & D yesivumelwano
I-APICMO inokunikela ngeenkonzo ezilandelayo, zonke ezixhaswa yimigaqo yethu eqinile kwi-Intellectual Property (IP), ukuqinisekisa ukuba iiprojekthi zisingathwa ngokugqithiseleyo kwithemba ngamaxesha onke.
Uphuhliso lweendlela zokwenziwa
Inkqubo ye-scale-up ukusuka kwigrama ukuya kwiiyunithi zamatriki
Ukuphela xa kuyimfuneko
Inkxaso epheleleyo yokuhlalutya kuquka i-HPLC, i-GC-MS kunye ne-NMR
Ngeemveliso apho inkqubo yokuvelisa isele ikhona, i-APICMO inokunikezela ngekhontrakthi kunye neenkonzo zokuvelisa iintlawulo kwiinkcukacha zomthengi. Ukongezelela kwiinkonzo ezikhankanywe ngasentla, sinikezela ngeenkonzo zengcaciso yokukhangela (ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo) ukuqinisekisa ukuba, apho kunokwenzeka, sisebenzisa kuphela imithombo yempahla ephakamileyo yamanani ekwixabiso lemakethe.
I-APICMO nayo ikwazi ukubonelela ngenkonzo yophando nophuhliso olwenziwe kumfuno zabathengi ezithile. Sinesiqinisekiso esiphezulu sokusombulula iingxaki ezinzima zobuninzi bethu kubathengi bethu kunye neeprojekthi ezinokuxhomekeka kwixesha elizeleyo (FTE) okanye iirhafu zansuku zonke. Xha ga mshelana ukufumanisa indlela lethu iqela le-R & D elinamakhono elinokwenza iprojekthi yakho elandelayo yimpumelelo yethu yakutshanje.